Nhazi R & D - Youxing Shark （Shanghai) Science & Technology Co., Ltd.
Mepụta uru nke mwepụta nke R&D na ihe ọhụrụ na usoro ụlọ ọrụ niile, ma gbaa ibe gị ume
Zhuhai Gaolan Port Innovation R&D Base bụ mba dị mma nke kemịkalụ na mpaghara ụlọ ọrụ mmepụta ihe ọhụụ, nke dị n'akụkụ ọtụtụ ụlọ ọrụ kemịkal mara mma. N'ọdịnihu, anyị ga-arụkọ ọrụ ike na mkpa ezi chemical ụlọ ọrụ ike a dum ụlọ ọrụ yinye usoro, ike isi ụkpụrụ na mba abụrụ stratejik green ụlọ ihe bonding mmemme nnyocha na mmepe na tozuru okè ngwaahịa arụmọrụ Mbelata a nnyocha na mmepe ubi, na nyere aka na ịrị elu nke ụlọ ọrụ na-emepe emepe nke mba. Ihe okike nke Zhuhai Gaolan Port nke nyocha ohuru na mmepe ohuru aburula uzo mbu “Silk Road” nke uzo azu nke umu azu shark.
Mepụta ntọala ntọala maka imepụta, ọmụmụ na nyocha na kọleji na mahadum
Mepee ọwa njem njem ma kesaa otu isi na kọleji na mahadum
Nchekwa teknụzụ na-abịa site na teknụzụ teknụzụ, na ikike nke nyocha sayensị na ihe ọhụrụ na-abịa site na ike ọhụrụ na-eweta mmelite ọhụụ nke echiche mgbe niile. Ya mere, Youxing Shark ga-agbasa na ọnụ ọgụgụ nke nkwonkwo oru ngo na mahadum na kọleji, na ịzụlite ihe nna ukwu na doctoral (gụsịrị akwụkwọ) talent onye iwekota agụmakwụkwọ na bara uru nkà, na-akwakọba ike maka ọdịnihu "Scientific Research Factory" nke Yixing Shark!
Mepụta International Chemical Research Information Alliance
Otu dị ka Informationlọ Ọrụ Informationkekọrịta Ozi nke Canada
Ntughari R&D bu okwu zuru uwa. Anyị ga-ehiwe ụlọ ọrụ mgbasa ozi mba ụwa na Canada, mba mepere emepe n'ụwa, iji nweta ozi mba ụwa kachasị ọhụrụ, ghọta ọnọdụ dị oke mkpa na ụlọ ọrụ ahụ, ma mụta banyere ụwa na-apụ apụ, ma nyekwa uru nke ozi mgbe na-etinye uru nke ngwaahịa na ọrụ n'aka ndị ahịa. N'otu oge ahụ, debe mmepe onwe gị na egwu, ma nọrọ n'ihu ụwa niile oge niile.
Shanghai Product Ngwa R&D Base
Ejiri ngwa ngwa ahia choro, ma kesaa otu ederede na ihe ndi ahia choro
Youxing Shark si ngwaahịa ngwa R&D isi na Shanghai nwere doro anya na obodo uru. Dị ka "isi ntọala" maka Youxing Shark, anyị ga-anọgide na-abụ ahịa na-adabere na ndị ọkà mmụta sayensị na-ekewa n'ime itoolu ngwa R&D oru ngo iche iche, na mụbaa ọtụtụ nke a maara nke ọma ụlọ elu oru. Ndị otu R&D teknụzụ ndị nkuzi nke ụlọ akwụkwọ na ndị dọkịta na-enye azịza maka ahaziri ndị ahịa. N'otu oge ahụ, n'omume ahịa, na-abanye n'ime mgbanwe teknụzụ nke ụlọ ọrụ ndị ahịa n'ọdịnihu, na-abụ nkwado maka mmepe ndị ahịa, na-agbasawanye ọhụụ nke ọhụụ site na "obere onwe" na "nnukwu onwe", na-enye ndị ahịa aka, na-enye onyinye na ọha mmadụ, na n'ikpeazụ, na-emezu onwe anyị.
R & D Nsonaazụ
Ikike nchọpụta ihe eji eme ihe 27
2 mepụtara nchọpụta Kemịkalụ
15 mmekọ bara uru patent ngwa
2 mepụtara patent ngwa
Ihe karịrị 50 mba technology nnyocha na mmepe nchọpụta Kemịkalụ
Nọgide na-enweta mba technology nnyocha na mmepe nchọpụta Kemịkalụ, nke mere na ị pụrụ ime ka ndị ọkà mmụta sayensị na ezi mkpebi. Site na nyocha nke patent, ụlọ ọrụ ahụ nwere ike nweta nghọta miri emi banyere usoro teknụzụ, usoro ụlọ ọrụ, usoro ahịa, na usoro ngwaahịa ọhụụ, wee kwupụta ma chepụta atụmatụ ụlọ ọrụ dị nso, etiti na atụmatụ mmepe.
Mpaghara R & D
Njikọ nke mkpuchi mkpuchi na ịchọ mma bọọdụ
Youxing Shark na-elekwasị anya na ngwa ọhụrụ nke mkpuchi mkpuchi na ịchọ mma teknụzụ njikọ. O tinyela aka na bọọdụ ndị mejupụtara dịka bọọdụ polystyrene gbasaa (EPS board), bọọdụ polystyrene a na-akpọpụta (XPS board), osisi ajị ajị anụ, polyurethane foam foam, na bọọdụ jikọtara ọnụ. Enwee ike ịchekwa ihe ịchọ mma, perlite, ciment ụfụfụ mkpuchi ihe na ihe ndị ọzọ na ụkpụrụ nke ikpuchi ọkụ, ike, mmiri na nguzo ihu igwe na teknụzụ ihe owuwu ọtụtụ afọ, ma na-aga n'ihu na-agbanwe ma zụlite ngwaahịa kwesịrị ekwesị iji gboo mkpa ahịa ma hazie ngwaahịa maka ndị ahịa.
Ọcha mmezi usoro bonding
Youxing Shark na-elekwasị anya na nkà na ụzụ ọhụrụ na ngwa nke bonding nke ọcha na mmezi usoro. Ọ na-emetụta ire ọkụ-retardant akwụkwọ ụgbụgbọ ọcha, osisi ọcha ajị osisi, iko magnesium ire ọkụ-retardant akwụkwọ n'ụgbụgbọ mmanụ abụgbọ osisi, elu-arụmọrụ antistatic na antibacterial ọcha osisi, aluminum n'ụgbụgbọ ntuziaka osisi, akwụkwọ n'ụgbụgbọ mmanụ a Afterụ Mgbe afọ nke nnyocha na usoro ụkpụrụ nke ihe ndị dị ka bọọdụ ejiri aka mee, ihe nrụpụta DP na-ekpo ọkụ ka e mepụtara nke ọma, nke nwere ike izute usoro dị iche iche dị ka ịgba ọkụ na-agba ọkụ na ịpị ọkụ. Ọ nwere ogologo oge na-arụsi ọrụ ike, ogologo oge oghe, na ọgwụgwọ ngwa ngwa. Ọ bụ usoro mmechi nke ịdị ọcha. Ngwaahịa kachasị amasị nke ọtụtụ ụlọ ọrụ pụtara ìhè n'ọhịa.
Njikọ nke ihe pụrụ iche maka ụgbọ mmiri
Akwa-ọsọ okporo ígwè ime mara mma bonding
Youxing Shark na-elekwasị anya na ngwa ọhụrụ nke ngwa ụgbọ okporo ígwè dị elu nke ihe eji eme ihe na teknụzụ, ma na-etinye ihe mkpuchi ụlọ dị n'ime ụlọ, aluminom n'ụgbụgbọ mmanụ a ,ụ, ngwangwa nke aluminom, mgbatị agbatị, galvanized steel plate, aluminum grille, aluminum ceiling, wdg. -ọsiri ụgbọ okporo ígwè dị n'ime ụlọ. E nwere nyocha ọhụụ pụrụ iche banyere njirimara ihe eji emepụta yana usoro njikọkọkọ nke ihe ụlọ. Ngwunye polyurethane dị elu na-eguzogide ihu igwe nke shark nwere ike izute ọkwa dị elu nke njikọta njikọ dị iche iche a kpọtụrụ aha n'elu nke ihe dị iche iche, ma hụ na ogologo oge nke ụgbọ elu ụgbọ elu dị elu. Jikọọ ma mechie.
Building mma ákwà mgbochi mgbidi ihe onwunwe bonding
Mgbidi ákwà mgbochi bụ mgbidi dị n'èzí nke ụlọ ahụ. Ọ naghị ebu ibu ma kpọgidere dị ka ákwà mgbochi, ya mere a na-akpọkwa ya "mgbidi mgbochi". Ọ bụ mgbidi dị nfe dị mfe na mmetụta ịchọ mma nke a na-ejikarị eme ihe n'oge a nnukwu na ụlọ dị elu. Youxing Shark na-eme nyocha nyocha banyere njirimara na teknụzụ njikọta nke ihe dị ka okwute, iko, aluminom veneer, aluminom-plastic panel, mbadamba ụrọ, na mbadamba anwụ maka iwuli mgbidi mkpuchi mara mma, ma mepụta ihe ọhụrụ ma mepụta nnukwu ike, dị elu -weatherability Polyurethane sealant nwere ike izute mkpa nke ụkpụrụ ụlọ ịchọ mma mgbochi ákwà mgbochi.
Njikọ nke ihe owuwu ígwè
The mpụga mgbidi nghọta osisi maka ígwè Ọdịdị ụlọ ihe onwunwe bụ a ọtụtụ ihe mejupụtara, tumadi ekewet nke akụkụ atọ, elu bụ a mkpuchi metal efere, n'etiti oyi akwa bụ a polyurethane ụfụfụ mkpuchi oyi akwa, na ala elu bụ aluminum foil echebe oyi akwa. Ọnụ ego ahụ dị elu, ihe ndị a chọrọ maka ihe ndị na-ekekọta ihe polyurethane gluu akara aka dịkwa elu. E nwere akwa-polyurethane sealants dị elu na-eguzogide ihu igwe nwere ike iru nnukwu ihe ọkụkụ maka ihe eji arụ ụlọ maka ịhazi ụlọ.
Temperaturenọgide okpomọkụ njem ihe onwunwe bonding
Ekwesịrị ijikọta akụkụ nke usoro ụgbọ njem nke thermostatic na mkpuchi polyurethane n'oge usoro mgbakọ ahụ niile iji hụ na ike dị ukwuu ma dịkwuo ogologo. Ihe mkpuchi Sanwichi maka mbadamba mkpuchi mkpuchi a na-ejikarị polyurethane, mbadamba polystyrene na bọọdụ akpọrọ na ahịa. Ihe ohuru ohuru nke ike polyurethane na-eguzogide ihu igwe nke Shark meputara na nzaghachi nye ihe ndi di n'elu nwere ike ijide n'aka na nkedo siri ike na nkwekorita nke ihe ndi njem n'igwe.
Adhesion nke fireproof na environmentally friendly ire ọkụ retardant
Fire ụzọ na-tumadi kewara ise ụdị na usoro nke ihe: ígwè, ígwè-osisi Ọdịdị, igwe anaghị agba nchara, aluminum alloy na cop
kwa. Youxing Shark na-elekwasị anya na nyocha ohuru ohuru na mmepe nke ihe oku na-emetuta gburugburu ebe obibi maka oku oku. The ngwaahịa nwere ike bonding arụmọrụ na ike nkekọ aluminum silicate ajị, nkume ajị, perlite fireproof osisi, vermiculite fireproof osisi, na metal, Ceramics na ihe ndị ọzọ na ígwè efere na ndị ọzọ ọla; ọ bụrụ na agba ya ma mee ka ọ dị ọkụ, ọ gaghị emetụta ike nke akwa ahụ.
High-ọgwụgwụ environmentally friendly osisi bonding
Youxing Shark na-elekwasị anya na ngwa ọhụrụ nke teknụzụ dị elu nke osisi siri ike, ma nwee ọmarịcha njikọta na softwood, ọkara siri ike, osisi siri ike na ihe ndị ọzọ siri ike. Ngwaahịa a na-eguzogide nri na mmiri, ma nwee nguzogide ihu igwe siri ike. Okwesiri maka ijikọ osisi dị iche iche.
Ngwa nyocha sayensị
Temperaturelọ okpomọkụ na-adịgide adịgide
Nọgide na-enwe ọnọdụ okpomọkụ na njikwa iru mmiri
Bụ ụlọ ọrụ nyocha nke atọ na-eguzogide akụrụngwa
Mee ka ọnọdụ okpomọkụ na iru mmiri nke mpaghara dị iche iche dị iche iche maka nyocha arụmọrụ iji hụ na ngwaahịa a kwụsiri ike
Hot mgbali ule simulator
Iwebata ụlọ ọrụ nzuzo nke China
Mee ka ndị ahịa nweta nrụpụta na ọnọdụ okpomọkụ iji hụ na arụmọrụ nke ngwaahịa ndị ahịa dabara ụkpụrụ
The igwe si rally igwe bụ ụwa n'elu ika
Dị ka SGS, onynyịnya na na. Nchọpụta nchọpụta ya ziri ezi na-emesi ike nkwenye dị elu nke ngwaahịa a
Oké gburugburu ebe obibi okpomọkụ na iru mmiri, nwalee ngwaahịa iguzogide sizinal mgbanwe
Nwee nkwa siri ike nke ngwaahịa a
Nchegbu ule nyocha
Gosiputa ihe nyocha nyocha nke akpaka
Kama ịpị akwụkwọ ntuziaka, a na-emesi ngwaahịa ahụ ike
Gbaa mbọ hụ na izi ezi nke nnwale data
Branddị a nke igwe nyocha nke friji bụ akara ụlọ na-eduga
Usoro ngwa ngwa ngwa ngwa, ọnọdụ siri ike, na-ekwe nkwa nkwụsi ike nke data nnwale